Iindaba - Kwenzeka ntoni kwii-smartwatches ukuba bachukumisa amanzi kakhulu?
Kwenzeka ntoni kwii-smartwatches ukuba bachukumisa amanzi kakhulu?
Ithini inkcazo yewotshi esebenzayo engangeni manzi? Ngaba kunokwenzeka ukuba uhlale unxibelelana namanzi ixesha elide?
Ngapha koko, inqanaba lokungabinothuli nelingenamanzi kwiimveliso ze-elektroniki ngokubanzi zibonakaliswa yi-IP. Ngokwetekhnoloji yokungena manzi kunye nenkqubo yokuvelisa, iimveliso zeHengmei Technology zinokufikelela kwinqanaba le-IP67 kunye ne-IP68 engenamanzi. Emva kovavanyo lwefektri, iimveliso zibonisa ukusebenza okungangenwa kwamanzi kwindawo ethile, enokuthi idlale indima yokhuselo emanzini.
Yintoni i-IPXX engenaManzi
I-IP68 lelona nqanaba liphezulu lokugcina uthuli kunye nenqanaba lokungena manzi. Uluvavanya njani iqokobhe eliqinileyo kunye nokusebenza okungangeni manzi, ikakhulu ukubona i-IPXX emva kwamanani amabini ama-XX.
I-X yokuqala yinqanaba elingenothuli, ukusuka kwi-0 kuye kwi-6, kwelona nqanaba liphezulu lingu-6.
Inqaku lesibini u-X linani elingangeni manzi, ukusukela kwi-0 kuye kwi-8, elona nqanaba liphezulu lingu-8.
IPX1 amanzi awela ezindlwini ngaphandle kwesiphumo
IPX2 ayinampembelelo xa indlu ithambekile ukuya kwiidigri ezili-15
IPX3 amanzi okanye imvula yehla kwiidigri ezingama-60 ayinampembelelo
IPX4 ulwelo kulo naliphi na icala kwiqokobhe alunampembelelo
IPX5 unokuhlamba ngamanzi ngaphandle kwengozi
IPX6 Ingasetyenziselwa kwi-cabin, indawo enamaza amakhulu
IPX7 unokuhlala emanzini ukuya kuthi ga kwimitha enye ubunzulu ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30
IPX8 unokuhlala emanzini ukuya kuthi ga kwi-2 yeemitha ubunzulu ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30
Le yimveliso yenkampani yethu, igama lemveliso: H68. Emva kovavanyo lweenjineli kunye nabavavanyi, ukusetyenziswa kwewotshi akuchaphazelekanga ngokuntywila emanzini ngobusuku obunye. Isakhono sokungena kwamanzi kwi-lever.
Kutheni le nto kungacetyiswa ukuba kushushu
Kwimeko yokuhlamba kufuneka uthathe ibhafu eshushu okanye ibhafu ebandayo.
Ngokubanzi, kunzima kwimveliso ye-elektroniki enomsebenzi ongangeni manzi ukungena emanzini xa uthatha ishawa ebandayo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuqina okunamandla kweemolekyuli zomphunga wamanzi kwindawo yokuhlambela eshushu, umphunga wamanzi oveliswa yishawa eshushu, i-sauna kunye nentwasahlobo eshushu kulula ukungena kwinxalenye yangaphakathi yesongo, eya kuthi ibangele ukuba umsebenzi wesongo ungabinakho isetyenziswe kwiimeko ezinzima.
Ubungqina obungenamanzi kunye nomphunga zizigama ezimbini ezahlukeneyo.
Izixhobo ngokubanzi azinako ukukhusela umphunga wamanzi ngaphakathi, njengokubhengezwa ngokubanzi kweemitha ezingama-30 zokuntywila kungena amanzi kwindawo yokuhlambela eshushu isenokubakho umphunga wamanzi. Kuyimfuneko ukuthathela ingqalelo ukudada, ukuba ukuntywila kunye neminye imisebenzi iya kuba nomngcipheko wamanzi, kwaye ukuba uqubha elwandle, ngenxa yolwandle olonakalisayo kulula ukubangela ukubola komnxeba wokutshaja, ukutywina iringi yerabha kunye okunye ukuguga ngokukhawuleza, kunye nokusebenza okungangeni manzi kwezixhobo akusosigxina, kunokuba buthathaka ngokuhamba kwexesha. Nokuba isongo se-smart asinamanzi kangakanani, ayifanele isetyenziswe phantsi kwamanzi ixesha elide. Isongo esine-smart sisoloko siyimveliso ye-elektroniki ekrelekrele. Nokuba liphezulu kangakanani ibakala elingangeni manzi le-bracelet smart, ukuba ulisebenzisa phantsi kwamanzi ngalo lonke ixesha, kuyakubakho umzuzu wamanzi ngengozi. Ke ngoko, ukuhlamba izandla mihla le, ishawa ebandayo, usuku olunethayo, ukubila kunokunxitywa, akukhuthazwa ukuba unxibe ibhafu eshushu okanye unxibelelane namanzi ixesha elide, ukuze wandise ubomi benkonzo yeemveliso ezinxitywayo ezikrelekrele. Ukongeza, izixhobo ziyawa, zingqubeke okanye zichaphazele ezinye iimpembelelo, ukunxibelelana namanzi esepha, ijeli yeshawa, isepha, iziqholo, into yokuthambisa, ioyile iya kuchaphazela ukumelana namanzi kwesongo.